Zvemukati Zvako Zvinonhuwa Nekuti Zvakarasika Zvinhu Izvi Martech Zone
Chitatu, September 9, 2015 Chitatu, September 9, 2015 Douglas Karr
Maindasitiri mushumo mushure memushumo unoramba uchiratidza chokwadi chekuti kukosha-kwehukama uye kuita kwemunhu makiyi echokwadi ekuwedzera mwero yekutendeuka Saka nei saka vatengesi vezviratidziro vachiramba vachinyora general drivel izvo zvakangofanana nechero munhu wekutyaira? Usiku hwekupedzisira ndakaita hurukuro kune imwe nzvimbo Sparks chiitiko uye ndakachidaidza:
Yako Yemukati Sucks. Chaizvoizvo Sezvawaida Izvo Kwairi.
Pfungwa yangu nemuratidziro yakanga isiri yekutuka kugona kwevanhu kunyora zvemukati; kwaive kushoropodza kugona kwavo nyora zvirimo kune vateereri vavo. Isu tinowanzo gara tichidzokera pakunyora zvemukati izvo tinotenda yakakosha, asi izvo zvinongobatana nechidimbu chevateereri vedu vese.
Dambudziko redu nderekuti vateereri vedu vakasiyana. Matarisiro maviri ane akafanana huwandu hwevanhu achave nemaitiro mazhinji akasiyana ekuvandudza hukama nekambani yako. Hatidi kutora izvo tichifunga.
5 Zvinhu zvekusimudzira Zvemukati Zvako
Wedzera Kuziva - nekuwedzera mifananidzo, odhiyo, kana vhidhiyo iwe uchawedzera kukanganisa uye kugona kwechinyorwa chauri kunyora.
Ita Kugoverana - kugadzirisa zvirimo kuvaka kukosha kwevaverengi kana vakagovana iri zano rinoshamisa. Batsira vaverengi kukura network yavo, batsira vaverengi kusimudzira hunhu hwavo, batsira vaverengi kuti vabatanidzwe kugovana zvemukati munharaunda yavo, kana kuvazivisa nezvechikonzero chavachagovana nekuti vane hanya.
Tsigira Sarudzo - vamwe vaverengi vanokanganiswa nekuvimba, chokwadi, kugona, manzwiro ekubatanidzwa kwako. Zvine mwero zvemukati zvine zvese izvi zvinhu zvinosangana nevamwe vaverengi.
Kukurudzira Chiito - sanganisira zvemukati zvinotyaira kunyengetedza - kubatanidza, kudzokorora, kubvumirana, kushomeka, kuenderana, uye chiremera.
Personnalisez - vanhu havashandure hupenyu hwavo kana kudzima pavanosvika kana kubva pabasa. Kutenga bhizinesi kunoitiswa neshamwari, mhuri, uye kukura kwedu pachedu. Kutenga kwako pachako kunokanganiswa nebasa rako. Kutenga mota, semuenzaniso, kunogona kukanganiswa nemweya mileage zvinonetsa zvekufamba kwenguva refu.
Case in point, takaita ongororo nekambani ye e-commerce nezuro. Ivo vane inoshamisa chengetedzo yevatengi uye yakakwira kutendeuka mitengo, asi nekufamba kwenguva vakave nenguva yakaoma kuwana vatengi vatsva. Patakataura navo, chinhu chekutanga chavakatiudza ndechekuti kambani yavo yaive yakasarudzika sei. Vakanga vari zana muzana muAmerica. Ruzhinji rwezvigadzirwa zvechigadzirwa zvaive zvakagadzirwa neAmerican (zvimwe zvinongedzo zvaisakwanisa kuwanikwa pano). Vakadaira nharembozha yavo pese paifona. Uye ivo vanovaka yavo yekuchengetera 100% yezuva-inofambiswa nesimba!
Ndinoona ichi chiitiko chakanyanyisa, asi zvese zvavaidada nekambani yavo zvainetsa kana kuti zvaisakwanisika kuwana pawebhusaiti yavo! Ko kana tikashandura zvemukati nezvinotevera:
Wedzera an mufananidzo yenzvimbo yekukanganisa mushanyi pavanongosvika panzvimbo iyi.
Goverana nhau pakuwana simba rekuzvimirira. Zvemagariro nemagariro mutoro chikonzero icho vaverengi vazhinji vanozogovana.
Sanganisira indasitiri chokwadi, infographics, chena mapepa, zvipupuriro, uye kesi zvidzidzo kubatsira kutsigira vashanyi ' zvisarudzo.
Mutengi anotova neyekutanga yemahara yekutumira uye yekutapudza zvinopihwa. Pamwe kuwedzera rimwe zuva rekupera kunogona kunyengetedza munhu nekupa chipo shomeka.
Ava vanhu vaifarira! Wadii kusasanganisira mavhidhiyo akaiswa munhoroondo yekambani, zvinoshamisa vatengi, uye mamwe emhando dzakasiyana dzevashandi? Kubatanidza pachako nevateereri vachachaira kutendeuka.
Zvekare, izvo zvaunotenda zvakakosha kune chako chigadzirwa kana sevhisi hazvisi izvo izvo mutengi wako anotenda kuti zvakakosha. Sangano redu rinowanzo tarisa pakutendeuka. Asi dzimwe nguva vatengi vanonyanya kufarira mhando yezvinyorwa zvatinopa. Ndicho chimwe chinhu chatinofanirwa kunge tichifunga mundangariro patinonyora zvemukati zvinokurudzira kambani yedu!
Tags: Cognitionkuita zvisarudzoPersonalizationkunyengetedzakugoverana